Wikidata:Fandraisana - Wikidata
ny bankim-pahaizana malalaka azon'ny tsirairay ovaina Statistika
Wikidata dia bankim-pahaizana izay azon'ny olona ary ny milina vakiana ary ovaina. Izy ity dia karazana banky sahala an'i Wikimedia Commons izay manangona ny aino aman-jery : Izy ity dia toerana anangonana ny fahaizana toa ny reference interwiki na fampahalalana ara-statistika. Manana fampahalalana amin'ny fiteny rehetran'ny tetikasa Wikimedia i Wikidata .
Azonao vakiana ny fampidirana ho an'ny fampahalalana fanampiny.
Ankehitriny eto amin'i Wikidata dia 97,846,651 no isan'ny iditra.
Hampiasa an'i Wikidata eo amin'ny wiki anao
I WIkidata dia tetikasa open source, ary ny fampahalalana rehetr ato dia azo ampiasaina ampahalalana
Fantaro fa hiova ny API hahazoana ny fampahalalana!
Manàna ny fanitarana Wikidata client eo amin'ny wiki anao
fanitarana Wikibase repository
Retrieved from "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Wikidata:Fandraisana&oldid=138068725"